Tor Browser ကို (Alpha) | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Tor Browser ကို (Alpha)
Tor Browser ကို (Alpha) APK ကို
Tor Browser ကို, privacy ကိုနှင့်အွန်လိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကမ္ဘာ့အပြင်းထန်ဆုံး tool ကို၏ developer များသည် Tor Project မှကထောက်ခံတစ်ခုတည်းသောအရာရှိတဦးကမိုဘိုင်းဘရောက်ဇာကိုဖြစ်ပါတယ်။
Tor Browser ကိုသင်တို့သည်ဤမျှ Third-party ခြေရာခံများနှင့်ကြော်ငြာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုအသီးအသီးက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်မလိုကျနိုငျအထီးကျန်။ သငျသညျ browsing ကိုအလိုအလျောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဆို cookies တွေကိုပြုမိနေသည့်အခါ။
Tor Browser ကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအရာကိုက်ဘ်ဆိုက်များကို သိ. မှသင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ကြည့်သူတစ်ဦးဦးကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သင့်ရဲ့ကြည့်ရှုခြင်းအလေ့အထစောင့်ကြည့်မည်သူမဆိုတွေ့နိုင်ပါသည်အားလုံးသည်သင် Tor ကိုသုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Tor ကိုအားလုံးအသုံးပြုသူများအခက်ခဲသင်သည်သင်၏ browser နဲ့ device ကိုအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးလက်ဗွေနှိပ်ခံရဖို့အဘို့အအောင်, တူညီတဲ့ကြည့်ရှုစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
သငျသညျ Android အတွက် Tor Browser ကိုအသုံးပြုသောအခါက Tor ကွန်ယက်ကိုကျော်ဖြတ်သန်းအတိုင်း, သင်တို့၏အသွားအလာကိုသုံးကြိမ်လက်ဆင့်ကမ်းများနှင့် encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကွန်ယက်ကို Tor relays များအဖြစ်လူသိများစေတနာ့ဝန်ထမ်း-run ဆာဗာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဒီကာတွန်း Watch:
Android အတွက် Tor Browser ကိုအတူ, သင်သည်သင်၏ဒေသခံအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးပိတ်ဆို့ခဲ့ကြပေမည်ဆိုဒ်များဝင်ရောက်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ဒီ app ကိုသင်တို့ကဲ့သို့အလှူရှင်များကိုအသုံးပြုလာသည်
Tor Browser ကိုကို Tor Project မှတစ်ဦးအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းကဖွံ့ဖြိုးပြီးအခမဲ့ open source software ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျလုံခြုံ, ခိုင်မာတဲ့ Tor ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီခြင်းနှင့်လှူဒါန်းခြင်းအောင်နေဖြင့်လွတ်လပ်သောနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ Give နှင့် Mozilla ကသင့်ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်: https://donate.torproject.org
Tor Browser ကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
- အကူအညီလိုတယ်? https://support.torproject.org သွားရောက်ကြည့်ရှု။ အဆိုပါလက်စွဲစာအုပ်မကြာမီလာသေး၏။
- Tor ကိုမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ: https://blog.torproject.org
https://twitter.com/torproject: - တွစ်တာပေါ်တွင် Tor Project မှ Follow
The Tor Project အကြောင်း
Tor Project, Inc ကိုတစ်ဦး 501 (ဂ) (3) အဖွဲ့အစည်းကိုခြေရာခံခြင်း, စောင့်ကြည့်ခြင်း, ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုမှလူများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်, အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အခမဲ့ open source software များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Tor Project မှရဲ့မစ်ရှင်, အခမဲ့ open source အမည်မဖော်နှင့် privacy နည်းပညာများဖန်တီးခြင်းနှင့်စေလွှတ်ခြင်းဖြင့်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုတိုး၎င်းတို့၏တားမြစ်ခြင်းမရှိသောရရှိနိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့, သူတို့၏သိပ္ပံနည်းကျနှင့်လူကြိုက်များနားလည်မှုကိုရှေ့ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Tor Browser ကို 9.0a1 - မေလ 21 2019
60.7.0esr မှ * Update ကို Firefox ကို
* Update ကို HTTPS ကိုနေရာတိုင်းမှာ 2019.5.6.1 မှ
* အသုံးပြုမှု slider ကိုခန့်: Tor ဒေသခံ
* Fix ကို Tor Preferences ကိုအဟောင်းတွေကို Android Device များပေါ်တွင်ပြ
* ကာကွယ်ဆေးပျက်ကျမှုက start-up, စဉ်အတွင်း
အန်းဒရွိုက်ကြောင့်သေဆုံးလျှင် * ပြန်လည်စတင်ပါပလီကေးရှင်း
* "Tor Browser ကို" ရန် "ကို Android ပေါ်မှာ Tor Browser ကို" နာမည်ပြောင်းရန်
start-up တားဆီးအန်းဒရွိုက် 4.4 အပေါ် * Fix bug ကို
အသေးစိတ်များအတွက် blog post: ကိုကြည့်ပါ:
42.28 ကို MB
Tor Project မှ